Samachar Batika || News from Nepal » नियमित मासु खानुहुन्छ ? सावधान! यी ९(नौ)प्रकारको रोग लाग्ला है
नियमित मासु खानुहुन्छ ? सावधान! यी ९(नौ)प्रकारको रोग लाग्ला है
पोखरा / बेलायतको अक्सफर्ड विश्वविद्यालयमा गरेको अनुसन्धानअनुसार नियमित रूपमा मासुको सेवनले नौ प्रकारका रोगहरूको जोखिम निम्त्याउँछ । दैनिक वा नियमित रूपमा मासु खाने मानिसमा मधुमेह, हृदय रोग, निमोनिया र अन्य धेरै गम्भीर रोगहरू हुनसक्ने जोखिम हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ११:०६